Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Game ၀ါသနာရှင်များအတွက် - Games CD Collections ♫
♪ Game ၀ါသနာရှင်များအတွက် - Games CD Collections ♫
Action, Simulation, Strategy ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ နာမည်ကျော် Arma3အတွက်ထွက်ရှိလာတဲ့ Expansion Pack ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ် (၂၀၃၅)ခုနှစ်ဝန်းကျင်၊ တောင်ပစိဖိတ် Tanoa ကျွန်းနယ်မြေအတွင်း စစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး လက်နက်သစ် (၁၃)မျိုး၊ ယာဉ်အသစ် (၁၀)မျိုး၊ တပ်ဖွဲ့သစ်၊ ယူနီဖောင်းသစ်တွေနဲ့အတူ Co-Operative Campaign (၄)ဦးထိ ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။
2. LEGO STAR WARS : The Force Awakens
Action-adventure ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ နာမည်ကျော်လီဂိုဂိမ်းစီးရီးရဲ့ ပဉ္စမမြောက်တင်ဆက်မှုပါ။ Rey, Finn, Captain Phasma, Poe Dameron, Han Solo, Kylo Ren အစရှိသည့် ဇာတ်ကောင် (၂၀၀)ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး level (၁၈)ခု၊ Trophies/Achievement (၃၀)ကျော်၊ Vehicle (၅၀)ကျော် ဖန်တီးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Romance of the Three Kingdoms 13
Strategy ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ နာမည်ကျော်ဂိမ်းစီးရီးဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ (၂)ရာစုခေတ် နန်းတွင်းတော်ဝင်ဇာတ်လမ်းနောက်ခံနဲ့ ဆော့ကစားရမှာပါ။ Trophies (၄၃)မျိုးနဲ့အတူ Traditional Campaign Mode နဲ့ Hero Mode ဆိုပြီး Game Mode အသစ် (၂)ခု ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။